स्वास्थ्य सङ्कटका बेला कहाँ छन् डा. गोविन्द केसी? |
स्वास्थ्य सङ्कटका बेला कहाँ छन् डा. गोविन्द केसी?
२०७८ जेष्ठ २ गते, आईतवार , ०७:३३ मा प्रकाशित
काठमाडौं। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको हटस्पट नेपाल बनेको बेला अभियन्ता डा. गोविन्द केसी कहाँ छन्? भन्ने आम प्रश्न उठेको छ। नेपालको अस्तव्यस्त स्वास्थ्यस्थिति र निजी अस्पतालहरूको कोरोनाका बिरामीहरूका लागि महङ्गो बेड र उपचार शुल्क सार्वजनिक गरेका बेला स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. केसीलाई धेरैले सम्झेका छन्।
गुणस्तरीय र निशुल्क स्वास्थ्य सेवाका निम्ति पटक पटक सत्याग्रह गरिसकेका डा. केसीलाई महासङ्कटको यो पीडामा धेरैले सम्झेका छन्। मिडियामा आफूले गरेका कामको प्रचारबाजी गर्न नरुचाउने डा. केसी साँच्चै यतिबेला कहाँ के गरिरहेका होलान्? आलोचकहरू त उनलाई स्वास्थ्य सङ्कटका बेला गुमनाम बनेको आरोप समेत लगाउँछन्।
तर चिन्नेहरुका निम्ति डा. गोविन्द केसी दुईओटा काम मात्र गर्छन, या उनी कतै स्वास्थ्य स्वयंसेवा गरिरहेका हुन्छन् या त चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षासँग सम्बन्धित अभियान र आन्दोलन चलाइरहेका हुन्छन्।
महासंकटका बेला डा. गोविन्द केसी कहाँ के गरिरहेका छन् भन्ने आमचासो बढिरहेका बेला स्तम्भकार सञ्जीव कार्कीले फेसबुकमा डा. केसी कहाँ के गरिरहेका छन् भन्ने बारे सार्वजनिक गरेका छन्।
स्तम्भकार कार्की लेख्छन्,
डाक्टर गोविन्द के सी कता छन्?
यो पटक महामारीमा कता गायब? डाक्टर के.सीको बारेमा तपाईँलाई केही जानकारी छ कि? यो सङ्कटमा पक्कै त्यसै बसेका छैनन् होला? डाक्टर के.सी कुन दुलोमा छ्न यतिबेला? जस्ता कति हितचिन्तकहरुले माया र श्रद्धापूर्वक सोधपुछ गर्न चाहेका छ्न भने कतिले जिस्काएर भए पनि उनको बारेमा जान्न चाहेको मेसेज, फोन र सोधनी आइरहेको छ। तसर्थ मैले उनको परिवारसँग सम्पर्क गरेर उनको अवस्था सोधेको थिएँ।
डा. केसी १ महिना केही अघिदेखि गृहयुद्धमा फसेको देश यमनको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको एक सरकारी हस्पिटलमा स्वयंसेवामा तल्लीन भएको जानकारी परिवारले दिएको छ।
नोटः खासमा डाक्टर के सी आफूले गरेको कामको बारेमा मिडियामा समाचार आएकोमा उस्तो रुचि राख्दैनन् र कतिपय अवस्थामा मलाई नलेख्न र सार्वजनिक प्रचार नगर्न भन्छन्। तर उनी सार्वजनिक सम्पत्ति बनिसकेकोले उनको बारेमा जान्ने हक आम मान्छेको हुन्छ। म उनको कामको मानवीय पक्षको प्रचार गर्नु आफ्नो कर्तव्य र धर्म सम्झन्छु, त्यसैले म अटेर गरेर उनका बारे बेला बेलामा सार्वजनिक गरिरहन्छु। कतिपय विषय र प्रसङ्ग मैले सार्वजनिक गरेको छैन ती कुराहरू उपयुक्त समयमा बाहिर आउनेछन्।
मानवताको कुनै सिमा, बन्धन र घेरा अनि देश हुँदैन त्यसैले डाक्टर गोविन्द के सी सङ्कटमा देश भित्र बाहिर जतासुकै पुग्छन्।
उनको धर्म,दर्शन,विज्ञान ,सेवा,विश्वास र आस्था मानवतावाद हो।
अघिल्लो सामाग्रीप्रधानमन्त्रीका नाममा अनुत्तरित प्रश्नहरू!
पछिल्लो सामाग्रीरोगभन्दा भोकको पिरलो